मङ्गलवार भुलेर पनी नगर्नु यी काम : अशुभः हुन्छ ,अमंगल हुन्छ ! - Sakaratmak Soch
मङ्गलवार भुलेर पनी नगर्नु यी काम : अशुभः हुन्छ ,अमंगल हुन्छ !
कुनै पुजा आजा गर्दा हामिले भगवन गणेशजीलाई सम्जने गरिन्छ मंगलबारको दिन भगवान गणेशजीको पूजा गर्दा मिल्ने छ । लाभै लाभ हरेक मानिसहरुले मंगलबार भगवान गणेशको पूजा गरेकै हुन्छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ ।धर्मशास्त्रका अनुसार यी काम मंगलबार गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन्। मंगलबार कुखुरा वा अन्य प‌ंक्षीको हत्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मानिन्छ । मंगलबारको दिन माछा खाँदा तपाइँलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मानिन्छ । मंगलबार मासु सेवन गर्नु हुँदैन । मंगलबारको दिन मदिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रोधमा वृद्धी हुन्छ ।
यसैगरी घरमा गणेश पूजा: हिंदू संस्कृतिमा भगवान गणेशको स्थान सर्वोपरी छ। हर शुभ काम भन्दा पहिले भगवान गणेशको आह्वान आबश्यक छ। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थीको दिन गणेश पूजा गर्ने गरिन्छ तर त्यस दिन बाहेक पनि प्रत्येक बुधवारमा गणेश आराधना गर्दा तपाईको खुशिहरुको र सम्रिद्धिको बाटो खुल्नेछ। बुधवारमा गरौ गणेश पूजन:गणेश स्तुतिका लागि बुधवारको दिन विशेष मानिएको छ । यस दिन बुध ग्रहका लागि पनि लिए तपाई पूजा-अर्चना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा बुध ग्रह अशुभ स्थितिमा छ भने बुधवारको दिन पूजा गर्दा यस दोषको निवारण हुन्छ।
देवता पनि गर्छन उपासना: देवतापनि आफ्नो कार्य बिना कुनै रुकावटले पूरा गर्न सर्बप्रथम गणेश उपासना गर्छन। शास्त्रमा पनि भगवान गणेशको महत्ताको वर्णन गरिएको छ। भनिएको छ कि एक पटक भगवान शंकर त्रिपुरासुरको वध गर्नमा असफल भए।असफलतामा महादेवले विचार गरे अनि शिवजीलाई ज्ञात भयो कि उनि गणेशजीको अर्चना नगरे रै त्रिपुरासुर संग युद्ध गर्न गएका थिए। त्यश्पश्चात शिवजीले गणेश पूजन गरेर फेरि त्रिपुरासुर माथि प्रहार गरे र बध गरे ।
गणेश जी को पुजा बिधि: बिहान स्नान गरे पश्चात तांबको पात्रमा गणेश जी को मूर्ति स्थापित गर्नुहोस्। पात्रलाइ राम्रो संग साफ गर्नुहोस् र पूजाको समय मुख पूर्व दिशामा राखनुहोस्। सफा आसनमा बस्नुहोस् र भगवान गणेश लाई फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन ले पूजा गर्नुहोस। गणपतिको पूजामा दुबो अर्पित गर्न न भुलौ यो अत्‍यंत शुभ मानिन्छ। पूजा पूर्ण गरेर गणेश लाई मोदकको भोग लगाउ। अंतमा भगवानको ध्यान गर्दै यो मंत्र को १०८ चोटि मनमा जाप को ॐ गं गणपतये नमः।
दिन भरि व्रत राखे पछि बेलुका पनि पूजा अवश्य गर्नु पर्दछ।। यो दिन भागवत महापुराणको पाठ गर्नु पनि शुभ मानिन्छ। बुधवारको पूजामा हरियो रंगको अत्‍यंत महत्‍व हुन्छ यो दिन हरियो रंगको फल, फूल और वस्त्र बस्त्र दान गर्नु शुभ मानिन्छ। बुधवारको व्रतमा नुन् खाना वर्जित हुन्छ।दिन्मा एक पल्ट मात्र भोजन गरौ र दही, मूंग दालको हलवा या कुनै पनि हरियो वस्तुले बनेको चीज खानुपर्छ।